Commanderdainik.comफेसबुकमा‘ब्ल्याकमेल’गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने ऋषिराम भट्टराई पक्राउ..................... – Commanderdainik.com
फेसबुकमा‘ब्ल्याकमेल’गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने ऋषिराम भट्टराई पक्राउ…………………
‘ड्याजलिङ क्विन’ को नाम फेसबुकमा राखेर मानिसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने ऋषिराम भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
मोरङ प्रहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘ड्याजलिङ क्विन’ लाई सार्वजनिक गरेको हो । फेसबुकमा ‘ड्याजलिङ क्विन’ नाम राखेर कुरा गर्दै पैसा असुल्ने काम ऋषिले गर्ने गरेका थिए ।
केही समयअघि सुन्दरहरैचा ५, गौशलास्थित भीमकुमारी ढकालको घरमा डेरा गरी बस्ने गुरुप्रसाद अधिकारीको पत्नी वर्ष १९ की प्रिती तिम्सिना (अधिकारी) ले आत्महत्या गरिन् । यो आत्महत्या प्रहरीलाई सामान्य लागेन । प्रितीको सुसाइट नोट र मोबाइलको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा ‘ड्याजलिङ क्विन’ले प्रितीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको खुल्न आएको थियो ।
प्रहरीले आत्महत्या नभएर प्रितीलाई घटना गराउन ‘ड्याजलिङ क्विन’ ले दुरुत्साहन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिदियो । मोरङ प्रहरीका एसपी विश्व अधिकारीले ड्याजलिङ क्विनले दुरुत्साहन गरेपछि प्रितीले आत्महत्या गरेको तथ्य पत्ता लगाएको बताए ।
प्रहरीका अनुसार ‘ड्याजलिङ क्विन’ फेसबुक आईडी प्रयोग गर्ने दीपा नाम गरेको केटीले अश्लील ‘फोटो पोस्ट गरीदिने’ भन्दै प्रितीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको रहेछ ।
‘पटक–पटक पैसा असुल्ने गरेको र पछिल्लोपटक पनि मागेको मितिमा पैसा नभएपछि आत्महत्या गर्नुपरेको’ भनि सुसाइड नोटमा लेखिएको थियो । ड्याजलिङ क्विन’ फेसबुक आईडी प्रयोग गर्ने दीपा भने खासमा केटी नभएर केटा थिए । उनी थिए ऋषिराम भट्टराई ।
उनले सुनसरीको इटहरी चौकको गोर्खा डिर्पाटमेन्ट स्टोरअगाडि पैसा लिन सुन्दरहरैचा ६ बस्ने सन्जिता निरौलालाई पठाएको पत्ता लगाएपछि प्रहरीले पिछा गर्यो र दुवै प्रहरीको फन्दामा परे । एसपी अधिकारीले म्याद थप गरी दुवैको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । फेसबुकमार्फत धम्क्याएर घटना गरिएको रहेछ एसपी अधिकाररलिे भने, बाँकी तथ्य खुल्न बाँकी छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरे ।
उपमहानगरपालिकाले गर्‍यो बिपि कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान संग चन्दा आग्रह……………..
सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउनको समय थप गर्ने निर्णय………………………………………..
बैशाख अन्तिममा देखिएको डेंगु यसपटक चैत महिनामै देखा,तीन जना डेंगु संक्रमित……….
‘लकडाउन’ उल्लंघन रोक्न खोज्दा कांग्रेसका स्थानीय नेतामाथि छुरा प्रहार…………………
राहतको लागि आवश्यक खाने तेल र दाल नपाउदा स्थानीय तहमा राहत वितरणमा समस्या………….
सरकारको एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकाको आवागमन रोक्ने निर्णय………..
बाटो सम्बन्धी विवादमा, छुरा प्रहारबाट एक बृद्ध सख्त घाइते……………………
‘लकडाउन’ पूर्णरूपले खुलेको कम्तीमा २ हप्ताको अवधिमा (एसईई)को नयाँ परीक्षा तालिका आउने
पहिलो पटक नेपाल भित्रै रहेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण……………
न्तर्रा्ष्ट्रिय उडान समेत १५ दिन ठप्प भएपछि विकसित मुलुकहरुले धमाधम आफ्ना नागरिक फिर्ता………